Iindaba -Isiqingatha sokuqala soqeqesho lolawulo lwezonyango eSanxin
Kunyaka okhethekileyo "wobhubhane", saqala sagaya "i-Xinhuo" ngeqonga lamafu safika nosapho lakwaSanxin ngoJuni 28. Italente sisiseko seshishini. UNobhala Jikelele u-Xi uye wagxininisa kaninzi ukuba iitalente zizinto ezinobuchule zokuqonda ukuvuselelwa kwelizwe kunye nokuphumelela inyathelo kukhuphiswano lwamanye amazwe. KwiSanxin, iitalente ezifanelekileyo zeSanxin zingumthombo wokwakha isiseko esidala senkulungwane kunye nesiseko seshishini sokuhlala singenakoyiswa.
Iqhosha lobomi kufuneka liboshwe kwasekuqaleni. Ukuba iqhosha lokuqala alilunganga, konke kuya kulunga. Kwisigaba sesithandathu se "Xinhuo sicwangciso" saseSanxin, inkampani iqulunqe isicwangciso soqeqesho esineenkcukacha, nesifakwe ngobukrelekrele kususela kumhla wokuqala wengqesho. Ukusuka kuqeqesho lwangaphandle ukuya kwintsebenziswano yeqela, ukusuka kwindima yokutshintsha ukuya ekucwangcisweni kwamakhondo, ukusuka kwinkcubeko yequmrhu ukuya kulawulo kunye nenkqubo yolawulo, ukusuka kwibali laseSanxin ukuya kwikamva leSanxin, ukusuka kubaphathi beenkampani ukuya kwizifundo zeshishini, abahlohli bethu bonke bayazi yonke into, kwaye "uXinhuo" wethu uzinikele kwaye awudinwa.
Njengoko intetho endala isithi, "utata uzelwe, utitshala uyafundisa.". “Utitshala” akamelanga nje ukunika ulwazi nezakhono, kodwa ukwongeza iimvakalelo zokunyaniseka nenkxalabo yabazali nokufundisa. Kwisiqingatha sokuqala, sabamba umsitho omkhulu wokunqula ootishala, ayisiyomsitho wodwa, kodwa inyathelo eliphambili kwikhondo elizayo likaGuan Peisheng. Njengoko isitsho, "ukumamela amazwi akho kungcono kunokufunda iminyaka elishumi". Umkhapheli uya kuba sisikhokelo sethu sokuvula indawo yokusebenza.
Kuphela ephepheni apho uya kuziva ungonwabanga ekupheleni kosuku, kwaye kuya kufuneka uziqhelanise nalo. ” Sanxin uye waphendula ngenkuthalo kwaye kuphunyezwa ngokucokisekileyo ukwakhiwa umkhosi omkhulu ulwazi-based, abasebenzi abanezakhono kunye ezintsha, waqhubela phambili umoya imodeli abasebenzi kunye neengcibi, kwaye wadala indlela kwezentlalo zabasebenzi ezukileyo kunye nomoya oqeqeshekileyo ukulwela imfezeko . Oko sikufundileyo akufuneki kuhlala ezincwadini okanye kwiintloko zethu, kodwa kufuneka kuphunyezwe ngokusebenza kunye nokuxabisa indalo. Kuya kufuneka sifezekise ubunye bolwazi kunye nokwenza, sifunde ulwazi oluyinyani kwaye siqonde eyona ntsingiselo ekusebenzeni, sikhuthaze isenzo ngolwazi kwaye sifune ulwazi ngokwenza.
“Nangona indlela ikufuphi, asinakuyenza; Nokuba lo mbandela mncinci, awunakwenzeka. ” Lonke ishishini, elikhulu okanye elincinci, lenziwa kumgangatho ophantsi komhlaba kwaye kancinci kancinci. Kuya kufuneka sibe ngqongqo kwaye sisebenze, sisebenze nzima kwaye sisebenze nzima. I-Xinhuo iqala umlilo wasethafeni, ongenakuphikiswa. Abantu baseSanxin kufuneka bazinze kwizimvo neenkolelo zabo, babe neminqweno ephezulu, babe phantsi emhlabeni, kwaye babe ngabahleli bamaxesha. Kwindlela ebonakalayo yokufezekisa iphupha likaSanxin's Centennial, kufuneka bawakhuphe amaphupha abo obutsha, kwaye benze iinzame ezingapheliyo zokubhala izahluko ezimibalabala zobomi kuphuhliso lwempilo yabantu!